आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण ८ गते शुक्रबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ साल श्रावण ८ गते शुक्रबार
साउन ८, २०७८ ०५:०१ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण ८ गते शुक्रबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई २३ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढशुक्लपक्षको चतुर्दशी तिथि पूर्वान्ह ९ः५४ बजेसम्म, त्यसपछि पूर्णिमा रहनेछ ।
मेष – उपकारी कार्य गर्न पाउँदा आनन्दको अनुभूति हुनेछ । पढाइलेखाइमा मन जानेछ । मिहिनेती प्रबृत्तिको विकास हुनेछ । ठूला व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहने देखिन्छ ।
वृष – गलत व्यक्तिको संगतले गर्दा नकारात्मक कार्यमा सहभागी भइनेछ । चिन्ता, पीरले सताउनेछ । कठोर बानी व्यवाहारका कारण आफन्तजनहरु टाढिने छन् । नयाँ लगानि एवं टाढाको यात्रा शुभ देखिन्न ।
मिथुन – पतिपत्नि बीच सामजस्यता रहनाले कार्य गर्न सहज हुनेछ । मन मिल्ने व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी भइनेछ । विशेष कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ । मानसिक क्षमतामा बृद्धि विकास हुनेछ ।
कर्कट – सामान्य झन्झट आइ लागेता पनि निरन्तर लागि पर्दा जीत तपाईँकै हुनेछ । श्रम मार्गबाट अपेक्षित लाभ मिल्दा हर्ष बढ्नेछ । सुखसुुविस्ताका साधनहरु जुट्नेछन् । मान्यजनको साथ लिएर कार्य गर्दा शुभ हुनेछ ।
सिंह – नयाँ ठाउँको भ्रमणले नयाँ ज्ञान ग्रहण गर्न पाइनेछ । पारिवारिक सहयोग÷साथ मिल्नेछ । पुराना समस्यालाई हल गर्दै अघि बढ्न सकिनेछ । टाढिएका आफन्तजनसँग समेत मिलन हुनेछ ।
कन्या – व्यर्थको कार्यमा भुल्दा गर्नैपर्ने कार्य भने अधुरै रहनेछन् । गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा परिनेछ । शारीरिक कमजोरीले कार्य गर्न मन लाग्ने छैन । दैनिक काम कार्यमा नै व्यस्थ रहनु उचित हुनेछ ।
तुला – पराक्रम बढेर जानेछ । दाजुभाईको साथले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछ । जोखिमयुक्त कार्यलाई पनि सहज तवरले पूर्ण गर्न सक्दा प्रशंसकहरु थपिनेछन् । घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ । शुभ समाचार मिल्नेछ ।
बृश्चिक – दोधारेपनले निर्णय लिन गाह्रो पर्न सक्छ, पूर्व तयारीका साथ कार्य आरम्भ गर्नुहोला । व्यवसायमा अरु दिनको तुलनामा आयदर बढ्नेछ । सहनशिलता र कृयाशिलताको विकास हुनेछ ।
धनु – नयाँ पद–प्रतिष्ठा मिल्ने समय रहेको छ । बोलि कै भरमा ठूला–ठूला कार्य पनि सहजताका साथ बन्नेछन् । सकारात्मक सोचको विकास हुनेछ । सन्तोषी प्रबृत्ति रहला । आकस्मिक धनलाभको योग बनेको छ ।
मकर – अरु दिनको तुलनामा शैक्षिक क्षेत्रमा ह्रास आउनेछ । आर्थिक पक्ष कमजोर बन्नेछ । विश्वास गरेका व्यक्तिले साथ छाड्ने छन् । समस्या र चुनौतिको सामना गर्नु पर्नेछ । सतर्कका साथ कार्यमा लाग्नुहोला ।
कुम्भ – लाभ स्थानको चन्द्रमा ग्रहका बलले आर्थिक पक्षमा विशेष सुधार हुनेछ । दैनिक कार्यमा समेत नयाँ तरिकाको प्रयोगले कार्य गर्न सहज हुनेछ । मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सहभागी हुने निम्तो पाइनेछ ।
मीन – सरकारी क्षेत्रका अपुरा कार्यलाई पहल गर्दा पूर्ण गर्न सकिनेछ । कार्य क्षेत्रमा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ । विश्वासको पात्र बनिनेछ । श्रम अनुसारको आर्थिक लाभ मिल्नाले काम गर्ने हौसला थपिनेछ ।